दलित भएकै कारण बेहुला र बेहुली बन्न हिँडे’का दुवैको गयो अकाल’मै ज्यान…
May 26, 2020 2706
दुई दिन यता दलित’ समुदा’यका एक युवा र एक किशोरीले च’रम जातीय विभेद’को ज्याद’ती खेप्दै अ’कालमा ज्या’न गुमाउनु परेको छ । प्रदेश ५ को रुपन्देही र कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा दलित समुदाय’का एक युवा र एक किशोरीले अन्तरजा’तीय प्रेम सम्बन्धका कारण जातीय विभेदको ज्याद’तीको शि’कार हुनुपरेको हो ।
रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा ११ बड्की गुम्बाकी १५ वर्षीया दलि’त समुदायकी किशोरी अङ्कारा पासी’ले बेहुली बनेकै दिन जातीय विभेदको ज्यादती कै कारण झुन्डिए’को अवस्थामा मृ’त भेटिइन् भने उता कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटका २० वर्षीय नवराज बिकले पनि जातीय विभेद र अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण भेरी नदीमा मृ’त फेला पर्नुपरेको हो ।
देवदहकी अङ्घिरा पा”सीले स्थानीय २२ वर्षीय वीरेन्द्र भरसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो । गत जेठ ९ गते उनीहरुलाई स्थानीयले सँगै फेला पारेका थिए । त्यसपछि त्यस वडाका वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरी लगायत’का समाजसेवीले ति किशोरीलाई प्रेमी भरकै जिम्मा लगाएर घर पठाएका थिए ।
घरमा भित्रिएपछि भरकी आमाले लुछ्ने, कु’ट्ने, कपडा च्याति दिने गरेको बताइन्छ । अन्ततः शनिवार सोही वडाको रोहिणी खोलाको रुखमा ती किशोरी झु’न्डिएर मृ’त फेला परेको देवदह ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दीपक महतले जानकारी दिए ।
यता, किशोरीका बाबु वलिराम पासीले भने छोरीको ह’त्या गरि सुनियो’जित रुपमा रुखमा लगेर झुण्ड्या’इएको दावी गरे । यस घट’ना वडाध्यक्ष चौधरी कै कमजोरीका कारण घटे’को दलित अधिकारकर्मीहरूको आ’रोप छ ।
जो बेहुला बनेर गए,ला:स बनेर आए
गत शनिवार साँझ प्रेमिका लाई बेहुली बनाएर घर भित्र्याउने सपना साँचेर जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमा हिँडेका नवराज बिकको त्यो सपना माया प्रेमका दुश्म’नहरुले चक’नाचुर पारिदिए । आज उनी ला’स बनेर अस्पतालको श’वगृहमा छन् । उनीसँग जन्तीका रुपमा पुगेका उनका छिमेकी टिकाराम बिक पनि आइत’बार साँझ भेरी नदीमै मृ’त फेला परेका छन् ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्वर ४ रानागाउँका २१ वर्षीय विकले रुकुम पश्चिम चौरजाहरी नगरपालिका वडा नम्वर ८ की १७ वर्षीया अञ्जली मल्ल (नाम परिवर्तन ) सँग प्रेम सम्ब’न्ध थियो ।
उनकी प्रेमिकाले घरदेखि तल लिन आउनु भनेपछि नवराजले आफुहरुलाई बोलाएर लिन गएको र गाउँलेहरुको आक्रम’णबाट भागेर बाँ’च्न सफल महेश कार्कीले बताए ।
अहिले चौरजहारी ईलाका प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेका १२ जना मध्येका कार्कीले भने, ‘नवराज उमेरमा मेरो दाजु पर्छन् । उहाँ र ठकुरी थरकी केटीसँग प्रेम सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाह थियो । शनिवार साँझ त्यही केटी लिन जाँदै’छौं आउनुपर्यो भनेर बोला’एपछि हाम्रो टोलबाट ६ ज’ना गयौँ ।
त्यहाँ पुग्दा अरु १० जना जम्मा भइस’केका रहेछन् । त्यसपछि अरु तीन जना थपिए पछि १९ जना भ’एर गयौँ । सबैलाई दाई ( नवराज ) ले बेहुली लिन जानुपर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।’
केटीको घरमा नपुग्दै माथि घरबाट आफूहरु’माथि ढुंगामु’ढा भएको सुनाए ।’मैले ती युवतीको घर देखेको थिएन । उनलाई चिने’को भने थिएँ । उनको घरदेखि तलबाट बाटोमा पुग्न साथ माथि घरबाट एक्का’सी एउटी महिला चिच्या’एको आवाज आयो । सा’ला फेरि आए डुमहरु……
यिनीहरुलाई आज मा’रेरै छाड्नुपर्छ भन्दै चिच्याए’पछि अरु दुई तिन जना मानिसहरु देखिए,’ उनले भने, ‘उनीहरुले माथि घरबाट ढुं’गा मुढा गर्न थालेपछि हामी भाग्यौँ । रात परिसकेको थियो । त्यसक्रममा पछाडि फर्केर हेर्दा गाउँ नै उर्लिएर आएको देख्यौँ । दायाँबा’याँ लुक्ने भा’ग्ने ठाउँ थिएन । भेरी नदीतिर भाग्यौँ । १९ जना मध्ये भेरी नदीमा हाम्फा’ल्ने ११ जना थियौं । ५ जना नदी तर्न सफल भयौं ।
कार्कीका अनुसार नदीमा हाम फालेका ६ जना बेप’त्तामध्ये दुई जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ । केही साथीहरुलाई गाउँले’हरुले कुटे’र प्रहरीमा बुझाए । नदीमा हाम्फा’ल्दासम्म माथिबाट ढुंगा बर्साउँ’दै थिए ।
जिल्ला प्रहरी का’र्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकायाले आफू ती किशोरी र बाबु’आमालाई नियन्त्रणमा लिई ब’यान लिइरहेको उनले बताए ।
उनीहरु’बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको पाइएको र घट’नाको अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो समा’चार तयार पार्ने बेलासम्म बेपत्ता अ’झै फेला परेका छैनन । – रातोपाटी बाट साभार
Prevप्रकाश सपुत लेख्छन्: ‘सरकार यो जुनीमा म ‘मान्छे’ मानिन्छु कि मानिन्न’ ?
Nextभारतबाट आएकी एक महिलाको क्वारेन्टाइनमै मृ’त्यु
भोलि असार १२ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
क्याप्टेन विजय लामा पनि भ्वाइस अफ नेपालमा, दिए यस्तो दमदार प्रस्तुति (भिडियो सहित)
बोल्दाबोल्दै भावुक भए प्रकाश सपूत र केकी अधिकारी, आखिर किन ? (भिडियो सहित)